Photo | Hub lasoo bandhigayo/ keyd/sawir/ Maxamuud Cabdi
22 July, 2013 GALGADUUD
Maamulka degmada Balanballe ee gobolka Galguduud oo kaashanaya hay’adda miino saarista ee Denmark ayaa ole-ole miino saaris ah ka bilaabay deegaanka Balanballe iyo tuulooyinka ku dhow dhow. Ololahan miino-saarista ee magaaladan ku taal xaduudka Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa bilowday 19kii Luulyo 2013 wuxuuna socon doonaa ilaa dhamaadka bisha.
Madaxa waaxda arrimaha bulshada ee maamulka degmada Balanballe Rijaal Axmed Maxamed ayaa raadiyo Ergo u sheegay in miino saarista ay ka socoto deegaannada Balanbale iyo tuulooyinka Balli-Howd, Oodaale iyo Jiicle oo hoos yimaada degmada.
Soddon iyo shan howl-wadeen soomaali ah oo u tababaran miino saarista ayaa ka shaqaynaya deegaanadaas. Lama qiyaasi karo tirada rasmiga ah ee miinooyinka ku aasan deegaanka Balanbale oo furin muhiim ah u aheyd dagaalladii Soomaaliya iyo Itoobiya dhex maray 1977.
Rijaal Axmed Maxamed wuxuu sheegay in miinooyinka oo deegaankaas lagu aasay inta uu socday dagaalkaas ay halis weyn ku hayaan nolosho dadka iyo xoolaha deegaanka muddo 35tii sano ka badan.
Waddooyinka muhiim ah ee deegaanka Balanbale ku xira qeybaha kale ee gobolka Galgaduud ayaa ah dhulka ugu halista badan ee miinooyinka la geliyay. Madaxa waaxda arrimaha bulshada ee maamulka degmada Balanbale Rijaal Axmed Maxamed wuxuu si gaar ah u tilmaamay waddooyinka ku xira degmada Balanballe degmooyinka Guriceel iyo Dhuuso-mareeb oo muhiim u ah ganacsiga degmada.
Rijaal Axmed Maxamed wuxuu sheegay in miinooyinka ku aasan deegaanka Balanballe ay waqti dheer qaadanayso in la wada saaro laakiin ay doonayaan in ay dhimaan halista miinooyinka dhulka ku jira, lana bixiyo inta la awoodo.
"Ma hayno tiro rasmi ah iyo calaamado aan tix raacno inkastoo ay jiraan dhawr meelood oo raadadka waxyaabaha qarxa ay ka muuqdaan" ayuu yiri Rijaal Axmed Maxamed oo la hadlay raadiyo Ergo.
Dhowr jeer oo hore ayay miinooyin dad ku laayeen deegaankaas, halista ugu badanse waxaa wajaha carruurta oo si ogaal darro ah ugu ciyaara miinooyinka kadibna ay la qaraxdo. Lix caruur ah oo ku nool dhulka miyiga ah ee degmada Balanballe ayay miino ay ku ciyaarayeen dishay saddex sano ka hor.
Maxamuud Cabdi Diirshe/MR